PressReader - Isolezwe: 2018-05-17 - Iza nokuhlukile iNtandokazi
Iza nokuhlukile iNtandokazi
Isolezwe - 2018-05-17 - IMIBONO - ZANELE MTHETHWA
UZOSHAYA ngonyawo olusha umcimbi wabesifazane ohlelwa yiSolezwe minyaka yonke, kulo nyaka nanemibukiso yamabhizinisi.
Lo mcimbi obizwa ngeNtandokazi, uzoba ngoJuni 23 e-Olive Convention Centre eThekwini, kulindeleke okuningi okusha kuwona. Ngaphandle kokuba khona kombukiso wamabhizinisi, kuzoba khona namazwibela okufundisa ngokupheka njengoba umcimbi uxhaswe abakwaSpekko. Umkhakha wokufundisa ngokupheka uzokwenziwa nguNksz Siwe Hlophe ovela kwaSpekko.
UNksz Zama Majola osemnyangweni wezokukhangisa kwiSolezwe, unxuse ukuthi abesifazane basheshe bathenge amathikithi ukugwema ukuphoxeka.
“Ngonyaka odlule baningi abaphoxeka ngenxa yokuphela kwamathikithi okwadalwa ukuhudula izinyawo.
“Kulo nyaka sinqume ukuba nomkhakha wezokukhangisa ngamabhizinisi ukuze sifukule abesifazane abasafufusa, bakhuthaze nabanye.
“Miningi imiklomelo ezowinwa ngabazohambela lo mcimbi. Ngenxa yezigameko zokubulawa kwabesifazane nokuhlonipha uNkk Winnie Madikizela-Mandela osanda kushona, sicela abesifazane abazohambela umcimbi bagqoke izingubo ezimnyama namaduku,” kuchaza uNksz Majola.
Uthe akukho sihloko okuzokhulunywa ngaphansi kwaso kodwa isikhulumi sosuku nguDkt Judy Dlamini ongusomabhizinisi nombhali wezincwadi. UDkt Dlamini uzoluleka abesifazane kwezamabhizinisi, akhulume nangempumulelo yakhe.
UDkt Dlamini onePhd in Business Leadership futhi ongudokotela owelaphayo, usanda kukhipha incwadi ethi Equal But Different.
UnguSihlalo nomsunguli weMbekani Group okuyinkampani esebenza emkhakheni wezempilo, kwezomnotho, nokulawulwa kwamabhizinisi, ezezindlu nezokuvakasha. Wakhulela eMarrianhill, eThekwini, kanti ushade noMnuz Sizwe Nxasana oyisikhulu esiphezulu saseFirst Rand Limited, abanesikole i-African Leadership Academy abasisungule ngokuhlanganyela.
Umphathi wohlelo kuzoba umsakazi woKhozi FM uDudu Khoza owathakaselwa kakhulu emcimbini odlule. Kuzonandisa umculi wowokholo uHlengiwe Mhlaba. Amathikithi ayatholakala kumaComputicket ngoR400 okuhambisana nesidlo sasemini nezipho. Umcimbi uzoqala ngo-10 ekuseni.
UZOLULEKA abesifazane akhulume nangempumelelo yakhe emcimbini weSolezwe uDkt Judy Dlamini ozobe eyisikhulumi sosuku kulo mcimbi obizwa ngeNtandokazi